Moto X 2014 terminal-kii ugu horreeyay ee qaata Android 5.0 Lollipop | Androidsis
Mar labaad, kuwan ka Motorola waxay sii wadaan inay naga yaabiyaan kuwooda siyaasadda guuleysiga ee cusbooneysiinta rasmiga ah, waana taas haddii warka ay siiyeen asxaabta Phandroid si rasmi ah ayaa loo xaqiijiyay, ka Moto X 2014 wuxuu noqon karaa terminal-kii ugu horreeyay ee qaata Android 5.0 Lollipop, mar kale ka hor xitaa xitaa Google Nexus.
Sida laga soo xigtay asxaabtayada ka socda Phandroid, kuwaas oo aan soo xigan isha si aan wax u yeelin, the Moto X 2014 wuxuu horeyba udhameyn lahaa cusbooneysiinta rasmiga ah ee Android 5.0 Lollipop, oo xitaa waxay qaadan doonaan dhowr toddobaad marxaladda tijaabada gudaha si loo xaqiijiyo in wax walba ay u socdaan sidii la rabay oo aysan qabin wax dhibaato ama bug ah, maaddaama nasiib darro ay u muuqato in Google ay la timid biyo-mareenno aad u tiro badan batteriga uu sababo isku xirka Wifi, oo xitaa horseeday dib u dhig cusbooneysiinta rasmiga ah ee boosteejadaada Nexus.
Ugu dambeyntiina, haddii si rasmi ah hadda loo xaqiijiyay in Moto X 2014 uu yahay terminal-kii ugu horreeyay ee qaata Android 5.0 Lollipop, xitaa kahor intaan Google xadka Nexus, waxaan noqon doonaa kahor tessitura ee in qofkii raba uu awoodo, oo sidaas ku kala furfuraya doodaha saboolka ah iyo kuwa nasiib darrada ah ee aan isku dayeyno inaan ku qancino shirkadaha waaweyn ee qaybta, hoggaamiyeyaasha muranka ku jiro ee iibka iyo ilaha dhaqaale ee badan oo ka badan kuwa Motorola.
Sawirada Android 5.0 ee muuqaalka loo adeegsaday baaritaanka gudaha. Sawirada Phandroid
Shirkadaha sida Samsung, Sony o LG taasi waxay naga dhigeysaa inaan ku xanibanno bilowga isbeddelada oo ka tegaya boosteejooyinka ugu dambeeya liiska rasmiga ah ama xitaa fulinta cusbooneysiin dambe, taas oo ka fog hagaajinta khibradeena isticmaalaha, inta badan way ka sii xumaataa ilaa ay ka baxeyso saldhigyada cusub ee la cusbooneysiiyay. Iyo haddii kale, waydii isticmaaleyaal badan oo ah Samsung Galaxy Note 3 iyo cusbooneysiinteeda cusub ee ku jirta Android Kit Kat.
Kaliya waa inaad ku wareegtaa qoraalkan in maalintiisii ​​aan wax u qoray Ka warbixi wararka cusbooneysiinta Samsung, oo fiiri faallooyinka akhristayaasha Androidsis naftooda si aad u aragto illaa heerka ay soo saarayaashu ugu badan yihiin shaqada iibinta boosteejooyinka cusub iyo kuwa qaaliga ah intay cusbooneysiin lahaayeen oo ay hayaan macaamiisha mar uun ku aaminay inay helaan terminal cusub oo Android ah.
Waxa aad u cad ayaa ah in markaan go'aansado inaan beddelo terminalkeyga, oo sidaad wada og tihiin aan leeyahay LG G2 taas oo iila muuqata aalad aan caadi ahayn, markan waxaan u sameyn doonaa a Google Nexus ama mid ka mid ah buug-yaraha Waqooyiga Ameerika Motorola, sidaa darteed sidan ayaan ku hubin doonaa inaan haysto, ugu yaraan 18-kii bilood ee ugu horreeyay, oo la damaanad qaaday cusbooneysiinta rasmiga ah iyo waqtiga rikoorka.
Ikhtiyaarka kale ee lagu iibsado terminal cusub ayaa ah inaad gasho bogga rasmiga ah ee Cyanogenmod, ParanoidAndroid, OmniRom ama horumariyayaal kale oo madaxbannaan, oo fiiri haddii terminaalka aan u doorannay iibsashada uu ku jiro kooda buugaagta terminal socon kara. Sidan ayaan ku hubinaynaa taageerada noocyada cusub ee Android xitaa muddo dheer ka dib 18 bilood. Haddayna ahayn, weydii Samsung Galaxy S GT-I9000 wali ku raaxeysanaya cusbooneysiinta mahadsanid taageerada rasmiga ah ee Cyanogenmod 11 Android 4.4.4.
Si loo dhammeeyo qoraalkan, oo aakhirka u soo baxay sidii had iyo jeer cabasho ah ee ku saabsan habka ay u dhaqmaan shirkadahaas waaweyn ee soo saara qalabka moobiillada. Waxaan rabaa inaan ku soo afmeero anigoo horey ugu hambalyeynaya hogaamiyaasha Motorola guusha ay ka gaareen siyaasada ay qaateen ee cusbooneysiinta alaabtooda la iibiyey iyo inay Moto X 2014 terminal-kii ugu horreeyay ee qaata Android 5.0 LollipopRuntii waxa muhiimka ahi waa inaad heysato, oo sida xaqiiqada ah waqtiga rikoorka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Motorola » Moto X 2014 wuxuu noqon karaa terminaalkii ugu horreeyay ee qaata Android 5.0 Lollipop
Salaan! Qoraal weyn runtiina waa inaan fahmay caradaada. Anigu waxaan ahay milkiile faraxsan oo ah Moto X 2013 runtiina waxay tahay inay u shaqeyso sidii ugu fiicneyd maalintii ugu horeysay ee aan iibsaday. Ma difaacayo cidna laakiin arrinta la xiriirta cusbooneysiinta maahan oo keliya arrinta soo saaraha, waddamada sida tayda oo kale (Argentina) waxaa nalagu qasbay inaan ku soo iibsanno qalab qandaraasyo, bilaash? Suura gal maaha ... In kabadan Motorola waxaan bilaabay ootada Moto X, bixiyeyaasha xun (Personal, Movistar iyo Claro) waxay qaadan karaan bilo iyo bilo iyo bilo. Xididka Waxaa laga yaabaa, (in fikrad lagaa siiyo, Nexus 6 ee bilaashka ah wuxuu leeyahay qiimo sarif ah 1400 1600 doolar) laakiin inbadan oo inaga mid ah ma khatar galno inaan helno warqad miisaankeedu aad u qaali yahay.
Marka laga hadlayo arinta wadayaasha, waa sheeko kale, cidina ma cambaareyneyso halkaan, waxa kaliya ee aan cambaareynayo ayaa ah in boosteejooyinka bilaashka ah ee shirkadahan waaweyn ee guud ahaan ku kaca cajiinka wanaagsan, ku joog heerka sarrifka ugu horeeya adigoon si rasmi ah ula socodsiin nagu qasbi inaan iibsanno mid cusub.
Sidaa darteed tusaalaha laga raacayo Motorola, oo xitaa ku dhawaaqay cusboonaysiinta rasmiga ah ee lollipop-ka Android 5.0, ee loo yaqaan 'Moto E', oo ah terminal-dhamaadka-hoose oo aan ka heli karno bilaash hawlwadeenka kaliya 100 Euro.
Runtu waxay tahay in motorola ay layaab ku noqotay, mid ka mid ah sababaha aanan u beddelin moto x ayaa ah taas darteed. Runta Motorola ayaa ka soo baxday gunta oo bixinta adeeg wanaagsan ayaa kasbanaya quluubta macaamiisha
Jawaab Edwin Perez
Weyn, Weyn, laakiin MA jiraan wax, markii ay dhacdo markaas waxay noqon doontaa sababta loo yiraahdo motorola weyn.
Ilaa daqiiqadaas waxba ma jiraan, waxaan sidoo kale aragnay daadadka galax s5 leh lollipop, iyo in lakabka Samsung uu yahay midka ugu badan ee lagu dhex jiro, diiwaanka, ma jecli Samsung gabi ahaanba taas, iyo wax ka yar kan badhanka dhexe waxay leeyihiin.
Motorola wax weyn ayey ku sameysay cusbooneysiinta KK, waxaana rajeyneynaa inay ku sameyn doonto cusbooneysiinta LP, laakiin waa inaan sugnaa, waaba intaasoo ay run noqotaa, iyo dabcan terminal ku dhow android saafi ah cudurdaar ma lahan in aan laga cusbooneysiinin isla waqtiga nexus, iyo gaar ahaan hadda markay soo saareen nexus 6 taasina waxay tusineysaa in si toos ah loola shaqeeyo google.
Diidmada suuragalka ah ee astaamaha wicitaanada codka ee WhatsApp ama Fake kale?
Android 5.0 OTAs waa la daahiyay cilad ba'an awgeed isticmaalka batteriga